ngomphathi ku 2021-02-02
Xa ukufumanisa okungahambi kakuhle, i-detector flaw, i-frequency, probe njalo njalo zilungisiwe, kwiimeko ezininzi zisebenzisa ngokuthe ngqo umgangatho ohambelanayo, cacisa le miqathango, kwaye uzame ukudibanisa nemimiselo yomsebenzisi. Ukufunyanwa kwe-ultrasonic kwe-shaft shaft enkulu, i-2 ~ 3 ...
Inkqubo esisiseko kunye nokusebenza kokubumba simahla
Inkqubo enokutshintsha ubungakanani kunye nobungakanani be-billet ngokuthelekiswa kakhulu ne-manuscript esebenzayo yeyona nkqubo iphambili yokukhubazeka kwinkqubo yokubumba simahla. Ezifana: Inkqubo esisiseko 1) Upsetti ...
Imingxunya ye-Flange bolt
Inani lomngxunya we-flange bolt kunye ne-bolt hole hole zichaziwe. Inani kunye nobubanzi bemingxunya ye-flange bolt iyahluka ngokodidi loxinzelelo lwe-flange, kodwa zonke iintlobo zeeflange kwiklasi yoxinzelelo efanayo ziyafana. Imingxunya ye-flange bolt icwangcisiwe kububanzi bemingxunya ye-bolt kunye ...